Hindisaha cusub: Shaqalaawayaasha oo deeyn u aadan kara leeysinka baabuurta | Somaliska
Hindisaha cusub: Shaqalaawayaasha oo deeyn u aadan kara leeysinka baabuurta
Waa arrin aad dabiici u ah in shaqa bixiyeha uu sharuud ku xirro dadka u shaqaaleeysiinayo ineey leeysin heeystaan, saas oo ay tahayna dadkoo dhami ma awoodaan ineey bixiyaan qarashaadka leeysinka.
Haddaba xafiiska shaqada ayaa dowlada u diray hindise loogu sahlayo dadka shaqo la’aanta ah hab ay ku qaadan karaan leeysinka baabuurta, taas oo ah ineey xafiiska CSN-ta ka dalban karaan lacag amaah ah oo iskaga bixiyaan qarashka leeysinka. Hindishan oo hadda qabyo ah ayaa su’aalaha ku gadaaman waxeey yihiin lacag intee la eg ayuu qaadan karayaa?. Si taasi loo ogaadana waa in la joogteeyda baaritaanka la xirriira in lacagtaasi ay ku baxeen cashiradda leeysinka.
Maxeey ka yiraahdeen taraafiik iskooladda?
Fikirkaan ayaa waxaa siyaalo kala duwan uga hadlay urruradda qaabilsan taraafiik iskooladda, waxaana ay qaarkood sheegeen in aaneey habooneeyn deeynta ay bixiso CSN-ta.
“Waxaan u maleeynayaa ineeysan ku shaqeeyenyn deeynta CSN-ta bixiso, waxaa ay ku xiran in lacagtaasi uu qaadanayo maamulka (deeyn qaataha) ama ay toos ugu dhaceeyso taraafiik iskoolka, waxaanu leenahay dhowista xogta ardaydeena oo ay tahay inaan dhoowrno, mana ahan mid socon karto, waxaana iman kara kala duwanaansho dabaqadeed oo xagga leeysinka ah” ayuu yiri Fredrik Sjöstedt oo ah madax urruurka qaranka ee barashada taraafiik iskooladda.
Dhinaca kale waxaa talaabadan u arka arrin wanaagsan urururka isbaheeysiga taraafiik iskooladda oo sheegay ineey tahay mid nidaam u yeeleysa darawaliinta.
“Waannu soo dhaweeyenynaa talaabo ceeynkaan ah, waxaana u maleeyneynaa ineey noqoneyso mid u yeesleeysa nidaam waxbarashadda leeysinada, sharuuduna tahay in la aado dugsiyada darawalinimadda (iskool wiido) ayey tiri Berit Johansson oo madax u ah urrurkaas iyadoo u warameeysay wargeyska maalin laha ah ee DN. Fikirkan ayaa haddii la meel mariyo waxaa uu dhaqan galayaa bisha sibteembar 1-deeda sanadka 2018-ka haddii Eebbe idmo.